- Page4of 24 - "သင့်အတွက် ကျော်ကြားသော အားကစားများနှင့် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ"
မန် ချက် စတာစီးတီးနည်းပြပက် ဂွာဒီယိုလာကမ နေ့ညက ဆောက် သမ် တန် ကို၂ဂိုး၁ဂိုးနဲ့အနိုင် ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲမှာစီးတီးအတွက် ပွဲချိန် ၉၆မိနစ် မှာအနိုင် ဂိုးသွင်းယူ ပေးခဲ့တဲ့ တောင် ပံကစားသမားရာဟင် စတားလင်းဒီရာသီကလပ် အတွက် အ ကောင်းဆုံး ပုံစံပြသ နေခြင်းရဲ့ နောက် ကွယ် မှာယုံကြည် မှုဆိုတာရှိ နေခဲ့တယ် လို့ချီးကျူး ပြောဆိုသွားပါတယ် ။ စီးတီိးအတွက် ဟီးရိုးဖြစ် ခဲ့ပြန် တဲ့စတားလင်းဟာဒီရာသီပြိုင် ပွဲစုံသွင်းဂိုး၁၃ဂိုးရှိ နေပြီဖြစ် ပြီးစီးတီးကိုပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ် ပေးဇယားထိပ် မှာ၈မှတ် အသာနဲ့ဦး ဆောင် နေ စေပါတယ် ။ ဂွာဒီယိုလာက “ဒီဂိုးဟာတကယ်
အေတီကို အသင်းမှာ အစောပိုင်းကာလတွေက ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်း မရှိတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဂရစ်ဇ်မန်းကိုယ်တိုင်က အင်္ဂလန်အင်အားကြီး ယူနိုက်တက်ထံ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ချေရှိတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါပြီ။ သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ ဘာစီလိုနာအသင်းကလဲ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ဘူးပေမယ့် ယူနိုက်တက်ကတော့ သူ့ကို ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်မှာတော့ ဂရစ်ဇ်မန်းက ” နောက်ထပ် ပြောင်းရွှေ့မယ်ကလပ်ဟာ ယူနိုက်တက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပေါ့ဘာနဲ့ ကျနော်က အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလေ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချက်က ကျနော့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုအပေါ်ကို သက်ရောက်မှုတော့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ် ကျနော် မသိနိုင်သေးတာတစ်ခုက ဘယ်အချိန်မှာ ကျနော် ယူနိုက်တက် ဂျာစီကို ဝတ်ဆင်မလဲ ဆိုတာကိုပါ။
MFF-MNL Awards Night 2017 ၌ ဆုတံဆိပျလကျခံရယူနသေညျ့ မွနျမာ့လကျရှေးစငျဖူဆယျအသငျး။ ဓာတျပုံ-ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ ၂ဝ၁၇ အာဆီယံဖူဆယျ ခနျြပီယံရှဈ ပွိုငျပှဲ၌ တတိယနှငျ့ အသနျ့ရှငျးဆုံးဆုတို့အပွငျ အာရှ ဖူဆယျခနျြပီယံရှဈပွိုငျပှဲကို ပထမဆုံး အကွိမျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရခဲ့သညျ့ မွနျမာ့ လကျရှေး စငျဖူဆယျအသငျးကို ဂုဏျပွုဆုကွေး ငှမြေား ခြီးမွှငျ့ခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။ ဂုဏျပွုငှခြေီးမွှငျ့ ပွီးခဲ့သညျ့MFF-MNL Awards Night 2017 ၂ဝ၁၇ ဆုပေးပှဲအခမျးအနားတှငျ မွနျမာ့ လကျရှေးစငျဖူဆယျအသငျးကို မွနျမာနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျမှ ဂုဏျပွဆုတံဆိပျသာ ပေးအပျခဲ့ပွီး ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ငှေ မပေးခဲ့သဖွငျ့ ဝဖေနျသံမြားထှကျပျေါခဲ့ပွီးနောကျ ယခုကဲ့သို့ ဆုခြီးမွှငျ့သညျ့ သတငျးထှကျပျေါလာခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ယခုနှဈရာသီ၌ အောငျမွငျမှု မြားရရှိခဲ့သညျ့ မွနျမာ့လကျရှေးစငျဖူဆယျ အသငျးကို ဂုဏျပွုဆုငှမြေားအဖွဈ မွနျမာနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျနာယက ဦးအောငျကိုဝငျးက
ရနျကုနျယူနိုကျတကျအသငျးခေါငျးဆောငျ ခငျမောငျလှငျ ကစားသမားဘဝမှအနားယူ
ကစားသမားဘဝမှ အနားယူရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့သညျ့ ခငျမောငျလှငျ။ မွနျမာ့လကျရှေးစငျ ကစားသမားဟောငျးနှငျ့ ရနျကုနျယူနိုကျတကျ အသငျးခေါငျးဆောငျ ခငျမောငျလှငျသညျ ကစားသမားဘဝမှ အနား ယူလိုကျကွောငျး သိရသညျ။ တရားဝငျထုတျဖျော ဝါရငျ့နောကျခံလူ ခငျမောငျလှငျသညျ ဘောလုံးသမားဘဝမှအနား ယူရနျ ပွီးခဲ့သညျ့ ရာသီကတညျးကစတငျ၍ သတငျးမြားထှကျပျေါ ခဲ့သျောလညျး ယခုနှဈဘောလုံးရာသီပွီးဆုံးမှသာ တရားဝငျထုတျဖျော ပွောဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။”ကြှနျတျော့အသကျက အခု (၃၄) နှဈ ရှိပါပွီ။ ဘောလုံးကစား သမားဘဝက အနားယူခဲ့တာ အသကျအရှယျကွောငျ့မဟုတျသလို ကွံ့ခိုငျမှုအနအေထားကွောငျ့လညျး မဟုတျပါဘူး။ အနားယူမယျလို့ အရငျနှဈတှကေတညျးက စဉျးစားခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ စဉျးစားရငျးနဲ့ပဲ ဘောလုံးကိုခဈြတဲ့စိတျကွောငျ့ ဆကျကစားဖွဈခဲ့တယျ။ ဒီနှဈရာသီ ပွီးမှသာ အနားယူမယျလို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာပါ”ဟု ခငျမောငျလှငျက ထုတျဖျောပွောဆိုခဲ့သညျ။ ဆှေးနှေးညှိနှိုငျး ဘောလုံးကစားသမားဘဝမှ အနားယူခဲ့သျောလညျး နညျးပွဘဝ ဖွငျ့ ဘောလုံးလောကတှငျကငျြလညျရနျ ရညျမှနျးထားပွီး
နေ့ရက်- ၁၀.၁၂.၂၀၁၇ အချိန်- နေ့လည် (၂:၀၀) နေရာ- သိမ်ဖြူလက်ဝှေ့ရုံ ================ Date: 10.12.2017 Time: (2:00)pm Venue: Thein Phyu Lethwei Stadium
ရီချာလီဆင် ကို ရောင်းထုတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စပါးနဲ့ ချဲဆီးကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ဝက်ဖို့ဒ်အမှုဆောင်ချုပ်
ဝက်ဖို့ဒ်အသင်းဟာ နည်းပြ မာကိုဆေးဗားကို အဲဗာတန်ရဲ့ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားမှုကနေ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဒီရာသီမှာုခြေစွမ်းပြနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ကစားသမား ရီချာလီဆင်ကိုလဲ ရောင်းထုတ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အမှုဆောင်ချုပ် ဒုဇ်ဘူရီက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရီချာလီဆင်ကိုခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာ လန်ဒန်ကလပ်တွေဖြစ်တဲ့ စပါးနဲ့ ချဲဆီးအသင်းတို့က ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်နေပါတယ်။ အသက် 20 အရွယ် ဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမား ရီချာလီဆင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကမှ ဖလူမီးနီးအသင်းကနေ ပေါင် 11.5 သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒီရာသီမှာ ဝက်ဖို့ဒ်အတွက် စုစုပေါင်း5ဂိုးအထိ သွင်းယူပေးထားတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို Sky Sports ရဲ့ ဘောလုံးသုံးသပ်သူ ဂျေမီရပ်နက်ကိုယ်တိုင်က ရော်နယ်ဒို လက်သစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တောင် ချီးကျုးထားခဲ့တာပါ။ အသင်းရဲ့ အမှုဆောင်ချုပ်ကတော့
ရီးရဲမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ မာဆယ်လိုဟာ ယူရို5သိန်းနီးပါ အခွန်ရှောင်ခဲ့တယ်လို့ မက်ဒရစ်မြို့က Alcobendas တရားရုံးမှာ ဝန်ခံထွက်ဆိုသွားခဲ့ကြောင်း ဘာစီလိုနာအခြေစိုက် သတင်းတွေက ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တရားရုံးနဲ့ နီးပ်တဲ့သတင်းတွေအရ မာဆယ်လိုဟာ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်အသုံးပြုခ ဝင်ငွေတွေကနေ အခွန်ရှောင်ခဲ့တာလို့ ဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ အဲဒီ ယူရို 490,917 ကို စပိန် အကောက်အခွန်ဌာနထံ ပြန်လည်ပေးဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခွန်ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေအရ အဆိုပါ ပြစ်မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ်4လ နဲ့ အခွန်ပဏရဲ့ 40% ကိုလဲ ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ပြန်လည်ပေးဆောင်ရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ သတင်းတွေအရတော့ မာဆယ်လိုဟာ 2006 ခုနှစ်က ဥရုဂွေး နဲ့ အင်္ဂလန်က company တွေရဲ့
ရီးယဲလ်အသင်းတွင် ကစားသမားဘ၀ကို ဘေးလ် အဆုံးသတ်လို
ရီးယဲလ်အသင်းမှ ဝေးလ်စ်လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်ကစားသမား ဂါရတ်ဘေးလ်၏ အေးဂျင့် ဖြစ်သူက ၎င်း၏ကစားသမားသည် ရီးယဲလ်အသင်းနှင့် ကစားသမားဘ၀ အဆုံးသတ်သည်အထိ လက်တွဲသွားရန် ဆန္ဒရှိနေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂါရတ်ဘေးလ်သည် လက်ရှိရာသီတွင် ဒဏ်ရာပြဿနာများကြောင့် ရုန်းကန်နေရပြီး မန်ယူအသင်းက ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည့်အတွက် ဇန်န၀ါရီအပြောင်းအရွှေ့မတိုင်မီ ဂါရတ်ဘေးလ်က ယခု ကဲ့သို့ ဖွင့်ဟခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အေးဂျင့်ဖြစ်သူက ရီးယဲလ်ပရိသတ်များအနေဖြင့် ဘေးလ်ကို ထောက်ခံအားပေးမှု ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းလည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ Source: Eleven Sports
အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီ နဲ့ နိုက်ဂျီးရီးယား အသင်းတွေကတော့ အသက်အငယ်ဆုံးအသင်းတွေအဖြစ် ရပ်တည်လျှက်ရှိနေ ============================= 2018 ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ခြေစစ်ပွဲအောင်တဲ့အသင်း ၃၂ သင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ CIES Football Observatory ကတော့ အဲဒီအသင်းတွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သုတေသနပြုစုခဲ့ပြီး၊ အဲဒီထဲကမှ ခြေစစ်ပွဲအောင်အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းတွေကို Sports Myanmar ပရိသတ်တွေအတွက် စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသက်အငယ်ဆုံး အသင်းအဖြစ် နိုက်ဂျီးယားအသင်းက ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၊ ပျမ်းမျှအသက်အကြီးဆုံး ခြေစစ်ပွဲအောင်အသင်းအဖြစ် ပနားမားအသင်းက ရတည်လျှက်ရှိနေပါတယ်။ ခြေစစ်ပွဲအောင် အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းများ – 1. ပနားမား (29.4) 2. အက်စလန် (29) 3. ကော်စတာရီကာ (29) 4. ဥရုဂွေး (28.7) 5.
အက်ရ်ှလေယန်းကယနေ့ည၀က်ဖို့ဒ်အသင်းနဲ့ Vicarage Road မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်အသင်းအနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့စမ်းသပ်မှုကိုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့မန်ယူနိုက်တက်ဟာဝက်ဖို့ဒ်ကိုသာအနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိပ်ဆုံးကမန်စီးတီးကိုငါးမှတ်အကွာနဲ့ဖိအားပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဖို့ဒ်ကစားသမားဟောင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိယူနိုက်တက်နောက်တန်းမှာခြေစွမ်းပြလျက်ရှိနေတဲ့ယန်းက “ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ကိုကစားရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အနိုင်သုံးမှတ်ရယူသွားချင်ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာခက်ခဲတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။ ၀က်ဖို့ဒ်ဟာကျွန်တော်ထွက်ခွာပြီးကတည်းကတော်တော်များများပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ဟာဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေပြီး ကျွန်တော်တို့အသင်းနောက်ထပ်ခက်ခဲတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တေ်ာကတော့အသင်းဟောင်းနဲ့၇င်ဆိုင်ရတာနှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အသက်၁၀နှစ်ကနေ၂၁ထိအဲဒီမှာရှိခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်လူငယ်ဘ၀တုန်းကအဲဒီမှာအများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီးအခုပြန်သွားရတော့မှာဖြစ်လို့ပျော်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဝက်ဖို့ဒ်ကွင်းမှာအနိုင်သုံးမှတ်ရယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။” လို့ပြောသွားပါတယ်။ ၀က်ဖို့ဒ်အသင်းဟာပရီးမီးယားလိဂ်မှာ၂ပွဲဆက်အနိုင်နဲ့အတူအဆင့်ရှစ်နေရာမှာရှိနေပြီးအဆင့်လေးနေရာကအာဆင်နယ်နဲ့လေးမှတ်သာကွာနေပါတယ်။ #SM ၀ကျဖို့ဒျနဲ့ပှဲမှာခကျခဲတဲ့စမျးသပျမှုကိုမြှျောလငျ့ထားပါတယျ #အကျရျှလယေနျး***********************************************အကျရျှလယေနျးကယနညေ့ဝကျဖို့ဒျအသငျးနဲ့ Vicarage Road မှာရငျဆိုငျရမယျ့ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျမှာမနျခကျြစတာယူနိုကျအသငျးအနနေဲ့ခကျခဲတဲ့စမျးသပျမှုကိုမြှျောလငျ့ထားတယျလို့ပွောလိုကျပါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယားရဲ့ဒုတိယနရောမှာရပျတညျနတေဲ့မနျယူနိုကျတကျဟာဝကျဖို့ဒျကိုသာအနိုငျကစားနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျထိပျဆုံးကမနျစီးတီးကိုငါးမှတျအကှာနဲ့ဖိအားပေးနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ၀ကျဖို့ဒျကစားသမားဟောငျးဖွဈပွီးလကျရှိယူနိုကျတကျနောကျတနျးမှာခွစှေမျးပွလကျြရှိနတေဲ့ယနျးက “ကြှနျတျောတို့ခကျခဲတဲ့အဝေးကှငျးပှဲစဉျကိုကစားရမယျဆိုတာသိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောတို့အနိုငျသုံးမှတျရယူသှားခငျြပါတယျ။ ဒီပှဲဟာခကျခဲတဲ့ပှဲတဈပှဲဖွဈလာမှာပါ။ ၀ကျဖို့ဒျဟာကြှနျတျောထှကျခှာပွီးကတညျးကတျောတျောမြားမြားပွောငျးလဲသှားခဲ့ပါပွီ။ သူတို့ဟာဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂျမှာအကောငျးဆုံးခွစှေမျးပွနပွေီး ကြှနျတျောတို့အသငျးနောကျထပျခကျခဲတဲ့ပှဲတဈပှဲကိုရငျဆိုငျရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့အသငျးဟောငျးနဲ့ရငျဆိုငျရတာနှဈသကျပါတယျ။ ကြှနျတျောအသကျ၁၀နှဈကနေ၂၁ထိအဲဒီမှာရှိခဲ့တာပါ။ ကြှနျတျောလူငယျဘဝတုနျးကအဲဒီမှာအမြားကွီးလလေ့ာသငျယူခဲ့ပွီးအခုပွနျသှားရတော့မှာဖွဈလို့ပြျောမိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောတို့ဝကျဖို့ဒျကှငျးမှာအနိုငျသုံးမှတျရယူနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ပိုမိုကောငျးမှနျပါလိမျ့မယျ။” လို့ပွောသှားပါတယျ။၀ကျဖို့ဒျအသငျးဟာပရီးမီးယားလိဂျမှာ၂ပှဲဆကျအနိုငျနဲ့အတူအဆငျ့ရှဈနရောမှာရှိနပွေီးအဆငျ့လေးနရောကအာဆငျနယျနဲ့လေးမှတျသာကှာနပေါတယျ။ Source: Sports Myanmar